Qiso murug leh ayaa qabsatay Hodan Abokar balse adeerkeed ayaa Senator loo doortay? Iyadana waxaa ciilay nidaamka beelaha ee 4.5 – Kalfadhi
Qiso murug leh ayaa qabsatay Hodan Abokar balse adeerkeed ayaa Senator loo doortay? Iyadana waxaa ciilay nidaamka beelaha ee 4.5
Doorashadii kuraasta Aqalka Sare ee gobollada-waqooyi ee todobaadkii hore lagu soo gabo-gabeeyay magaalada Muqdishu, ayaa sannadkan ciishay Hodan Abokor Xasan Caafi oo aheyd musharrax, kaddib markii nidaamka awood-qeybsiga beelaha ee 4.5 uu ka saaray tartanka, iyadoo fadhida hoolka doorashada.
Prof. Cabdi Ismaaciil Samatar oo ku beel ah Hodan Abokor, ayaa kusoo baxay kursigii labaad ee doorashadda, kaddib markii uu ka adkaaday musharraxiinta kala ah Prof. Maxamed Maxamuud Allabari iyo Cabdikariim Maxamed Xasan.
Hodan ayaa tartanka doorashada geli laheyd haddii uu guuleysan lahaa musharrax Prof. Maxamed Maxamuud Allabari balse nidaamka awood-qeybsiga beelaha ee 4.5 ayaa diiday in laba qof oo isku beel ah la doorto ama ay doorashada galaan.
Hodan oo kalsooni badan ku qabtay diyaar-garowgeeda iyo dadaalkii ay soo waday sannado, ayaa sheegtay in haddii la dooran lahaa Prof. Maxamed Allabari ay iyaduna kusoo bixi laheyd kursigii ay u tartameysay.
Balse Deeqa Xasan Xuseen ayaa si fudud ugu guuleysatay kursigii shanaad ee doorashada maalintii labaad, kaddib markii nidaamka beelaha ee 4.5 uu Hodan Abokor ku qasbay in ay tanaasusho.
“Nidaamka 4.5 ayaa saameeyay dadaalkii aan soo waday muddo dheer. Laakiin qof Professor ah oo adeerkey ah oo aan jeclahay ayaa kusoo baxay kursigeyga, umana shalaynayo. Allah ayaan ka baryayaa beddelkiisa in aan helo. Kursigeyga waxaa uu noqday 4.5”, ayey tiri Hodan Abokor.
Dadaal ayaan soo waday, anniga oo aan gaarin heerkii aan rabay ayaa waxaa i reebay nidaamka beelaha ee 4.5, ayey sii raacisay hadalkeeda.
Hodan Abokor Xasan Caafi oo telefishanka iyo radio Hargeysa uga soo warami jirtay magaaladda Boorama, ayaa sannadkan dooneysay in ay mar kale u tartanto doorashadda Aqalka Sare ee Soomaaliya.
Sannadkii hore ayaa looga adkaaday labo cod, balse diyaar-garowgeedii sannadkan waxaa hal-bacaad lagu liisay ka dhigay nidaamka awood-qeybsiga beelaha ee 4.5.
Hodan oo ah qof dhallinyaro ah ayaa leh hiigsi dheer, kamana aysan shalaynin $10-kii kun ee dollar ee ay u bixisay diiwaan-gelin ahaan doorashada Aqalka Sare, waxaana wacad ay ku martay in ay sidii wadan doonto dadaalkeeda.
Guddiga hir-gelinta doorashooyinka heer federaal oo ku baaqay in deg-deg loo soo dhammeystiro 8-da kursi ee ka dhiman Aqalka Sare
Marwada koowaad ee dalka oo dalka Turkiga la kulantay madaxda Wakaaladda Iskaashiga iyo isku-duwidda Turkiga ee TIKA